• On behalf of the SAVF Social Services I would like to request to place a newspaper advertisement to locate the biological parents of Baby Phakoana born on 19/12/2018. The biological mother is Nteboheleng Phakoana. Any person with information please contact social worker Mbali Buthelezi at SAVF Social Services in Prince Alfred Street, Pietermaritzburg on 033 342 1229.
• Sicela ukufuniswa ubaba kaSphumelele Ndlovu ozalwa uNokuphiwa Ndlovu ongasekho emhlabeni, obehlala eMbali unit J. Igama lika baba alaziwa. Onolwazi cela athintane nosonhlalakahle uNP Hlongwane ku 033 392 8610 noma avakashele emahhovisi ethu Kwambilakhahlela (390 Pietermaritz Street).
• Sicela ukufuniswa ubaba kaNtethelelo Khumalo ozalwa uXolile Khumalo ongasekho emhlabeni, obehlala eMbali unit J. Igama lika baba alaziwa. Onolwazi cela athintane nosonhlalakahle uNP Hlongwane ku 033 392 8610 noma avakashele emahhovisi ethu Kwambilakhahlela (390 Pietermaritz Street).
• Sicela ukufuniswa ubaba kaMelokuhle Luthando Ngwane waziwa ngokuthi u Sbu. Kuthiwa wayedabuka e Bulwer ngokuzalwa. Onolwazi cela ashayele usonhlalakahle u NP Hlongwane ku 033 392 8610 noma avakashele emahhovisi ethu Kwambilakhahlela(PMB service office).
• Sicela ukufuniswa uMampho Nqhaoki ongumama ka Mankemane Nqhoaki, Karabo Nqhoaki, Anatholia Nqhoaki, Suprice Nqhaoki noBaatile Nqhaoki. Umndeni owase Vubamasi kwa Pata. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uN. Khumalo ku 033 392 8605.
•Sicela ukufuniswa abazali ba Luthando no Oluhle Shangase. Umama ngu Nobuhle Shangase ongaziwa ulaphi nendawo, ubaba akaziwa ungubani nokuthi owalaphi. Onolwazi axhumane nosonhlalakahle uT. Meyiwa ku 033 392 8600/7 kwaDepartment of Social Development (PMB service office, Mbilakhahlela).
•Sicela ukufuniswa umama ka Sthembile no Reabetsoe Gasa, ongu Mohlakoana Ramane Nthakoana ongaziwa washonaphi. Ubaba wezingane uNtholen Gasa. Onolwazi axhumane nosonhlalakahle uT. Meyiwa ku 033 392 8600/7 kwaDepartment of Social Development (PMB service office, Mbilakhahlela)
• Sicela ukufuniswa ubaba ka Nkosiyakhe Mthembu ozalwa 2008.10.29. Umndeni ungowase unit 1 eMbali. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uN. khumalo ku 033 392 8600.
• Sicela ukufuniswa uAyanda Sanelisiwe Memela ongumamama ka Wandile Memela, Cebo Memela no Philasande Memela onolwazi Sicela axhumane nosonhlalakahle uN.Khumalo ku 033 392 8600.
•Sicela ukufuniswa ubaba wezingane zaka Mkhize ezihlala Ezinketheni igama lezingane uMkhize Amahle kanye no Mkhize Siyabonga,umama wazo uMkhize Rebecca ongasekho emhlabeni.
Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle base Thandanani Children’s Foundation uNtokozo Ncobeni, uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni ku 033 345 1857.
• Sicela ukufuniswa ubaba wezingane zakwaMnguni ezihlala Ezinketheni amagama azo uMnguni Nomvelo Princess kanye noMnguni Siboniso, umama wabo kwakungu Mnguni Nomakhwezi Alvinah ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle base Thandanani Children’s Foundation uNtokozo Ncobeni, uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni kulenombolo 033 345 1857.
• Sicela ukufuniswa ubaba kaMbhele Thembelethu ohlala eMpumuza ngaseVezokuhle Primary School,umama wakhe kwakungu Mbele Samukelisiwe ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle base Thandanani Children’s Foundation uNtokozo Ncobeni,uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni kulenombolo 033 345 1857.
• Sicela ukufuniswa ubaba ka Xulu Nondumiso ohlala eZinketheni, umama wakhe nguSithole Nobuhle ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle base Thandanani Children’s Foundation uNtokozo Ncobeni, uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni kulenombolo 033 345 1857.
• Sicela ukufuniswa ubaba ka Mtshali Azime Amkelwa Ntwenhle ohlala kaMpumuza, umama wakhe kwakungu Mtshali Nompilo ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle base Thandanani Children’s Foundation uNtokozo Ncobeni, uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni kulenombolo 033 345 1857.
• Sicela ukufuniswa abazali ba Mchunu Samkelo ohlala eZinketheni, umama wakhe nguMchunu Nokuthula ongaziwa ukuthi washonaphi, ubaba wakhe naye akaziwa washonaphi negama lakhe alaziwa ukuba ungubani. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle base Thandanani Children’s Foundation uNtokozo Ncobeni,uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni kulenombolo 033 345 1857.
• Sicela ukufuniswa ubaba ka Zondi Aphelele ohlala eMpumuza. Umama wakhe ngu Zondi Nomfundo Angel ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle base Thandanani Children’s Foundation uNtokozo Ncobeni, uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni kulenombolo 033 345 1857.
•Sicela ukufuniswa umama kaMabaso Thandokuhle ohlala eZinketheni ogama lakhe ngu Mabaso Kwenzeka,ubaba wakhe ngu Tibe Alfred Mahlathini ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle base Thandanani Children’s Foundation uNtokozo Ncobeni,uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni kulenombolo 033 345 1857.
• Sicela ukufuniswa umama kaMazibuko Xoliswa ohlala eMpumuza, ubaba wakhe ngu Kwazi Innocent Hlengwa ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle base Thandanani Children’s Foundation uNtokozo Ncobeni, uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni kulenombolo 033 345 1857.
• Sicela ukufuniswa ubaba ka Nzuza Abelo ohlala eZinketheni,umama wakhe kwakungu Nzuza Zinhle ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle base Thandanani Children’s Foundation uNtokozo Ncobeni, uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni kulenombolo 033 345 1857.
• Sicela ukufuniswa ubaba kaNguse Siyanda ohlala eZinketheni,umama wakhe kwakungu Nguse Mathombi ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle base Thandanani Children’s Foundation uNtokozo Ncobeni,uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni kulenombolo 033 345 1857.
• Sicela ukufuniswa abazali balezingane uPhetha Andile, Phetha Philasande kanye noPhetha Nolwazi ezihlala eCopesville endaweni yaka Pakkies,igama likamama ngu Phetha Thembi akaziwa ukuthi washonaphi, nobaba akaziwa igama lakhe nokuthi washonaphi. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle base Thandanani Children’s Foundation uNtokozo Ncobeni, uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni kulenombolo 033 345 1857.
• Sicela ukufuniswa abazali ba Mchunu Samkelo ohlala eZinketheni. Igama lamama uMchunu Nokuthula, igama likababa alaziwa bobabili labazali abaziwa ukuthi bashonaphi nendawo. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle base Thandanani Children’s Foundation uNtokozo Ncobeni, uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni kulenombolo 033 345 1857.
• Sicela ukufuniswa ubaba walezingane ezilandelayo uNdlovu Andile kanye no Ndlovu Anele ezihlala eSmero, umama wazo kwakungu Ndlovu Bongekile ongasekho emhlabeni.
Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle base Thandanani Children’s Foundation uNtokozo Ncobeni, uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni kulenombolo 033 345 1857.
• Sicela ukufuniswa izihlobo zalezingane ezilandelayo UNdawo Sphelele no Ndawo Sanele zihlala zodwa eZinketheni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle base Thandanani Children’s Foundation uNtokozo Ncobeni, uThandelani Gumede noma uZiphora Ngubeni kulenombolo 033 345 1857.
• UMnyango wezokuThuthukisa koMphakathi eNew Hanover Service Office licela ukufuniswa ubaba kaXimba Nokwanda Nomvula owaziwa ngoMathobela isbongo amthola kuXimba Busisiwe Joice ongasekho. Onolwazi sicela axhumane nosonhlakahle uNks Mchunu kulezinombolo 033 502 2160 ngezikhathi zomsebenzi.
• UMnyango wezokuThuthukisa koMphakathi eNew Hanover Service Office licela ukufuniswa ubaba kaGwamanda Nonkululeko ogamalakhe kungu Xaba Nkululeko wase Honeyville, Pietermaritzburg amthola kuGwamanda Hlanzekile Ebony ongasekho.
Onolwazi sicela axhumane nosonhlakahle uNks Mchunu kulezinombolo 033 502 2160 ngezikhathi zomsebenzi.
• Sicela ukufuniswa uDeneo Molefe umama Ka Themba Sehlabo no Refilwe Sehlabo abahlala no baba Wabo uMosoele Sehlabo abahlala e Willowfountain. Onolwazi sicela axhumane no sonhlalakahle u N. P. Hlongwane ku 033 392 8610 noma avakashele emahhovisi ethu Kwambilakhahlela.
• Sicela ukufuniswa ubaba ka -Okuhle Hlophe ohlala kwa Mshengu. Umama wakhe u Thembeka Hlophe osashona owayehlala eSweetwater kwa-Gandaganda. Onolwazi ngicela athintane nosonhlalakahle u Zanele Makhaye ku 033 342 0141.